यस्ता छन् काँक्रो खानुको १० फाइदाहरु - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
यस्ता छन् काँक्रो खानुको १० फाइदाहरु
प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०७५, शुक्रबार March 22, 2019
एजेन्सी । जाडो मौसमको अन्त्यसँगै नेपालमा बिस्तारै वातावरण न्यानो हुँदै गर्मी हुने अवस्थामा रहेको छ । यस्तोमा गर्मी मौसम सुहाउँदो काँक्रोको लागि उपयुक्त समय पनि शुरु भएको मान्न सकिन्छ । काँक्रोमा भएका अनेक गुण र कलिलो काँक्रो खाँदा आउने मज्जाको कारण पनि यस्को प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
एउटा करिब ११९ ग्रामको काँक्रोमा १४ ग्राम क्यालोरी, ०.२ ग्राम फ्याट हुन्छ । यसबाहेक यसमा ११५.११ ग्राम पानी, २.४ मिलिग्राम सोडियम, २.६ ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ०.८ ग्राम डायटरी फाइबर, १.६ ग्राम सुगर, ०.७ ग्राम प्रोटीन, २ प्रतिशत भिटामिन ए, ६ प्रतिशत भिटामिन सी, २ प्रतिशत क्याल्सियम र १ प्रतिशत आइनर हुने वैज्ञानिक रुपमै पुष्टी भइसकेको छ ।
यसको प्रयोगले विभिन्न फाइदा हुने गरेको छ । केहि विशेष फाइदाहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
१. शरिरमा पानीको मात्रा पुग्छ
काँक्रोमा पानीको मात्रा पर्याप्त हुनाले यसको प्रयोगबाट शरिरमा पानीको मात्रा पुग्न सहयोग पुग्छ । स्वादिलो पनि हुने र पानीको मात्रा पुग्ने भएको यो फल सबैको छनौटमा पर्ने गरेको छ ।
२. पर्याप्त शक्ती प्रदान
पानी बाहेक विभिन्न भिटामीन र आइरन पनि भएकोले यसको सेवनले शरिरलाई पर्याप्त शक्ती पनि दिन्छ ।
३. वजन घटाउन सहयोगी
वजन कम गर्न शरिरमा अनावश्यक क्यारोली जम्मा हुनबाट जोगाउनु पर्छ । काँक्रोमा क्यालोरी झण्डै शुन्य बराबरनै हुन्छ । यसको सेवनले पेट भरिने र अन्य भिटामीन पाइने हुँदा यसको प्रयोग बढ्दा वजन घट्ने पक्का छ ।
४. कोलस्ट्रोल नियन्त्रणमा सहयोगी
काँक्रोमा कोलस्ट्रोल विल्कुलै हुँदैन । यसमा भएको सोडियम, भिटामीन र क्याल्सीयन लगायतका तत्वले शरिरको कोलस्ट्रोल कम गर्न मद्दत गर्ने भएकोले पनि यसको प्रयोग हितकारी छ ।
पेट सम्बन्धी रोगको मुल कारण नै पाचन प्रणालीको खराबी हो । काँक्रोमा पर्याप्त मात्रामा फाइबर हुने हुनाले यसको प्रयोगले पाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न मद्दत पुग्छ ।
६. किड्नी स्टोन हटाउन सहयोगी
पानीको मात्रा बढि हुने र काँक्रोको अन्य तत्वले किड्नीमा थुप्रिएको स्टोन हटाउन सघाउने कुरा वैज्ञानिकहरुले पुष्टी गरिसकेका छन् । काँक्रोको नियमित सेवनले स्टोनलाई घटाउँदै हटाउन सहयोग गर्छ ।
काँक्रोको नियमित सेवनले हरेक प्रकारको क्यान्सरबाट जोगाउने दाबी गरिएको छ । यसमा भएको विभिन्न तत्व क्यान्सर प्रतिरोधी भएकाले पनि यस्तो दाबी गरिएको बुझिएको छ ।
८.उच्च रक्तचाप नियन्त्रण
काँक्रोमा पर्याप्त हुनुको साथै यसले शरिर र दिमागलाई ठण्डा पु¥याउँने भएकाले पनि उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोगी हुन्छ ।
९. टाउको दुखाइको समस्या हटाउँछ
टाउको दुख्ने समस्या अहिले ठुलो समस्याको रुपमा देखिएको छ । अधिक मानिसलाई यस्तो समस्या रहेकोमा काँक्रोको सेवनले यसमा कमि ल्याउने बताइएको छ ।
१०. अनुहारको छालालाई राम्रो बनाउँछ
काँक्रो खाने मात्र होइन यसको झोललाई छालामा लगाउँदा घामले डढेको, डण्डीफोर जस्ता अनुहारको छालाको समस्याहरु समाधान गर्दछ । काँक्रोको झोल अनुहारमा लगाउँदा छाला नरम पनि हुने हुनाले गर्मीमा अनुहार बिग्रिनबाट पनि जोगाउँछ ।
सहजै बजारमा सुपथ रुपमै पाइने काँक्रोमा विभिन्न फाइदाहरु भएकोले यसको प्रयोग मानव शरिरलाई हितकारी प्रमाणित भइसकेको छ । यद्यपी काँक्रो विषादी प्रयोग नगरिएको हुनुपर्नेमा भने सजग हुनुपर्छ । हाल बजारमा उच्च मात्रामा विषादी प्रयोग गरिएको काँक्रोहरु पनि पाइन्छ । यस्तो काँक्रो प्रयोग गर्दा शरिरलाई फाइदा नभइ थप नोक्सान पु¥याउन सक्ने तथ्यमा सजग हुनु अपरिहार्य छ ।
ओलीले खोजे भागबन्डा, न्यायालय र संवैधानिक अंगमा एमालेलाई भाग दिन सर्त
काठमाडौं । प्रस्तावित संविधान संशोधन देशको एकता र अखण्डताविरुद्ध भएको अडनका साथ संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको […]
रविन्द्र मिश्र सँगको यो घोच पेच !
अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्च अमेरिकाको नेपाल शाखामा चर्चित कलाकारहरु
असनेपाल न्युज । अमेरिका । अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्च अमेरिकाको नेपाल शाखा भर्खरै मात्र पुनर्गठन भएकोछ । […]
साउन १५ । काठमाडौं,आज साउन १५ गते, नेपालीहरुले खीर खाएर मनाइरहेका छन । कृषि प्रधानदेश नेपालमा […]
सर्वोच्चले तोक्यो मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय,गणेशले पाए सफाई
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङ्गेलाई अदालतले ५ वर्ष जेल सजायँ सुनाएको छ । उनलाई […]
मदिराले मातेका युवकले स्कुटी चलाउदा चार महिला घाइते
मङ्सिर २०। सिरहा, जिल्लाको लहानमा स्कुटीको ठक्करबाट चारजना महिला घाइते भएका छन । घाइते हुनेहरुमा भोजपुरकी […]